‘इतिहासकै खराब सुनुवाइको अध्यक्षता गर्दै नेन्सी’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेन्सी पेलोसीले कंग्रेसको इतिहासमै खराब महाअभियोगको सुनुवाइको अध्यक्षता गरेको आरोप लगाएका छन् । नेन्सी पेलोसीले अमेरिकाको इतिहासमै पक्षपातपूर्ण सुनुवाइको अध्यक्षता गरेको र सिनेटका बहुमत प्राप्त नेता म्याकोनेलसँग पनि निष्पक्षताको माग गरेको ट्रम्पले ट्विटरमार्फत गुनासो गरेका छन् ।
नासाकी महिला वैज्ञानिकले रचिन् इतिहास
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाकी महिला वैज्ञानिक क्रिस्टिना कोचले लगातार एकै फ्लाइटमा २ सय ८८ दिन अन्तरिक्षमा बिताएर शनिबार इतिहास रचेकी छन् । यदि उनी २०२० को फेब्रुअरीमा पृथ्वीमा फिर्ता आइन् भने उनले अन्तरिक्षमा ३ सय २८ दिन बिताउनेछिन् । क्रिस्टिना २०१९ मार्च १४ मा नासाका लागि फ्लाइट इन्जिनियरका रूपमा इन्टरनेसनल स्टेसनका लागि उडेकी थिइन् । योभन्दा पहिले सेवानिवृत्त अन्तरिक्ष यात्री मार्क केलीले इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा ४ सय ३८ दिन बिताएका थिए ।
२०२६ मा चौथो र २०३४ मा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै भारत
भारत सन् २०२६ मा जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न सक्ने देखिएको छ । युकेस्थित सेन्टर फर इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) को नयाँ रिपोर्टमा यस्तो देखिएको होे । सन् २०३४ मा जापानलाई पनि पछि पार्दै भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
हुवावेले चीनमा मात्रै १० करोड फाइभ–जी फोन बेच्ने
धेरैभन्दा धेरै अपरेटरले अर्को पुस्ताको नेटवर्कमा जाने तयारी गरेसँगै फाइभ–जीको युग नजिकिएको छ । यसै सन्दर्भमा चीनको दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले आफ्नो व्यापक आन्तरिक माग पूरा गर्नका लागि चिनियाँ बजारमा मात्रै २०२० मा १० करोड स्मार्टफोनको ढुवानी गर्ने भएको छ । जापानी विद्युतीय कम्पनी ताइयो युडेनका प्रमुख कार्यकारीले यस्तो बताएका हुन् । यो कम्पनीले विभिन्न स्मार्टफोन कम्पनीहरूलाई सेरामिक क्यापासिटर्सको आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
अमेरिकाले रूसको इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न सक्ने
आजको विश्वमा इन्टरनेटबिना एक क्षण पनि बिताउन अत्यन्त कठिन हुन्छ । स्कुल, कार्यालय, व्यवसाय सबै इन्टरनेटबाट चलिरहेका हुन्छन् । तर, कुनै कारणले पूरै देशको नेटको सम्पर्क बन्द भयो भने के होला ? सामान्य मानिससका साथै सरकार, बैंक, बिमा कम्पनी, अखबार, टिभी सबै बन्द हुन जान्छन् ।
मंगल ग्रहमा किन पुग्न सकेनन् मानिस ?
पछिल्लो समयम्म आइपुग्दा विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलै प्रगति भइसकेको छ, तर आज पनि यस्ता कैयौं विषयवस्तु छन्, जसले मानिसलाई सधैं चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तै चुनौतीमध्येको एक हो— मानिस रातो ग्रह अर्थात् मंगल ग्रहमा पुग्न नसक्नु । यसका पछाडि धेरै कारण छन्, जसका बारेमा अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले जानकारी गराएको छ ।
शीर्ष १० अर्बपतिले एक दशकमा कति कमाए ?
विगत १० वर्षको अवधिमा विश्वका शीर्ष १० धनी झनै धनी भएका छन् । हामीले यहाँ उनीहरूले विगत १० वर्षको अवधिमा कति कमाए भन्ने विषयमा फोब्र्सले सार्वजनिक गरेअनुसारको सम्पत्ति प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौ ।
२०१९ मा जापानको जन्मदर कीर्तिमानी न्यून
जापानको जनसांख्यिकी संकट झनै खराब भएको छ । पाका उमेरका मानिसको संख्यामा भएको वृद्धि खेप्दै आएको मुलुकमा यो वर्षको प्राकृतिक जनसंख्याको वृद्धिदर कीर्तिमानी न्यून भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यो वर्ष यो मुुलुकमा शिशु जन्मको अनुमानित संख्या ८ लाख ६४ हजारमा झरेको छ । १८९९ मा अभिलेख राख्न सुरु भएदेखिकै यो न्यून भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
रूसमा १८ अर्बको स्टिल्थ फाइटर दुर्घटना
रूसको लडाकु विमान पुटिनको वायु सेनामा प्रवेश गर्नु केही दिनअगाडि दुर्घटनामा परेको छ । सुखोई सु–५७ स्टिल्थ फाइटर रूसको सुदूर पूर्वमा आगोको ज्वालासहित दुर्घटना भएर पूरै ध्वस्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । पाइलट भने इजेक्टर सिटबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर आउन सफल भएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, लामो समयको खडेरी तथा लामो आन्दोलनका कारण हाइटीमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको बताइएको छ । यहाँ विगतमा महिनौंदेखि आन्दोलन भएको थियो । त्यसका कारण पनि यहाँको आर्थिक विकास तथा क्रियाकलापहरूको अवस्था नाजुक बनेको र यसले गर्दा खाद्यान्नको आपूर्तिमै कमी आउने अवस्था देखिएको पाइएको हो ।
रूसी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन ट्रम्पले गरे हस्ताक्षर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसदेखि जर्मनीसम्म प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्न निर्माणाधीन पाइपलाइनलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ पाइपलाइन निर्माण गरिरहेका रूसी कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बेलायतको बेरोजगारी दर सन् १९७४ पछिकै न्यून
बेलायतको बेरोजगारी दर सन् २०१९ को पछिल्लो त्रैमासिक (अगष्ट–अक्टोबर) मा सन् १९७४ पछिकै निम्न बिन्दुमा झरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ओएनएस) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार बेलायतमा करिब १२ लाख ८० हजार व्यक्ति बेरोजगार छन् । सन् २०१८ को सोही अवधिको तुलनामा यो संख्या ९३ हजारले कम हो भने पाँच वर्ष पहिलेको सोही अवधिभन्दा यो संख्या ६ लाख ७३ हजारले कम हो ।
अमेरिका विश्वकै ठूलो तेल उत्पादक मुलुक
अमेरिका विश्वकै ठूलो तेल उत्पादक मुलुक भएको छ । अमेरिकामा तेल उत्पादनमा भएको तीव्र विस्तारले दैनिक १ करोड २० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन भएपछि यो मुलुक विश्वकै ठूलो तेल उत्पादक भएको होे । एक दशकभन्दा कमको अवधिमा देशको सेल आयलले दैनिक उत्पादनमा ८० लाख ब्यारेल तेल थपेपछि अमेरिका विश्वकै पहिलो नम्बरको तेल उत्पादक बनेको हो ।
भारत–इरान द्विपक्षीय वार्ता
भारत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच आइतबार द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । उनीहरूबीच आइतबार इरानको राजधानी तेहरानमा सो वार्ता भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री शुब्रमन्यम जयशंकर हाल इरानको भ्रमणमा रहेका छन् । उनले आइतबार अपराह्न राजधानी तेहरानमा विदेशमन्त्री मोहमद जावेद जारिफबीच सो भेटवार्ता भएको बताएको छ । आइतबार उनीहरूबीचको भेटवार्ता खास गरी दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढीकरणका क्षेत्रमा भेटवार्ता भएको विदेशमन्त्री जारिफले बताएका छन् ।
भारतमा प्रदर्शन जारी
संशोधनसहितको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको विषयलाई लिएर आइतबार पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । आज सो कानुनको विरोधमा विभिन्न संघ संगठनले संयुक्त रूपमा केन्द्रयी रेल्वे स्टेसनमा बृहत् प्रदर्शन गरेको छ । ती सबै संगठन नयाँ कानुनको विपक्षमा रहेका छन् ।